पार्टी अध्यक्ष त्याग्दै प्रचण्ड, देशको राजनीति नै तरंगित यस्तो छ कारण — Imandarmedia.com
पार्टी अध्यक्ष त्याग्दै प्रचण्ड, देशको राजनीति नै तरंगित यस्तो छ कारण
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबाट बिदा हुने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । उमेरका हिसावले आफू ७० वर्षको नजिक पुगिसकेकाले पनि अब युवाहरुलाई पार्टीको नेतृत्व लिन आग्रह गरे ।
शनिबार माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लीग ९वाईसीएल०को राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उमेरका हिसावले हामी ७० वर्ष आसपासमा छौँ । संविधान, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षालाई अघि बढाउने जिम्मा अब तपाइँहरुको हो। तर तपाइँहरु नेतृत्व लिन तयार नभएसम्म छाड्न मिल्दैन।
प्रचण्डले भनेका छन् । प्रचण्डले अब पार्टीको भूमिकाबाट बिदा भएर संस्मरण लेख्ने इच्छा रहेको समेत बताएका थिए । साथै पार्टीको नेतृत्वबाट बिदा भएर भिन्न भूमिकामा बस्ने इच्छा भएको उनले बताएका थिए । साथै सत्तारुढ गठबन्धन संविधानको रक्षा, राष्ट्रियता र लोकतन्त्र सुदृढिकरणका लागि बनेको बताएका थिए । साथै गठबन्धनलाई बचाइराख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो ।
यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लक्षित गर्दै निरकुंशता र प्रतिगमनकारी शक्तिलाई परास्त गरेरै मुलुक नयाँ मोडबाट अघि बढेको बताए । तर अझै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले यो गठबन्धनलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ुप्रधानमन्त्री पदका लागि ओलीले ठगी धन्धा गरेको समेत उनले आरोप लगाए । उनले भने ुदुई वर्षमा सरकारको जिम्मेवारी मलाई दिने भने तर दिएनन् । तमसुकमा सही हस्ताक्षर गराए तर कार्यान्वयन गरेनन्ु उनले भने ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकता गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट आफूले ज्ञान प्राप्त गरेको बताउनुभएको छ । शनिबार वाइसीएलको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो । ओलीले संसद विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको लागि घात गरेको समेत उनले बताएका थिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डाले सम्बोधनका क्रममा भन्नुभयो, ‘केपीसँग एकता गरेर के पाउनुभयो ? भनेर साथीहरुले प्रश्न गर्नुभयो, मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आए । अरु त के पाउनु छ र ? ठूलो ज्ञान प्राप्त गरेर आएको छु । त्यो ज्ञान अब कांग्रेस र माधवजीलाई काम लाग्छ ।
सबैलाई काम लाग्ने ज्ञान प्राप्त गरे ।’सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा युवाहरुलाई नेतृत्व दिने मन भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले आफू छिटोभन्दा छिटो राजनीतिबाट बिदा हुने चाहना भए पनि युवाहरु तयार नहुँदासम्म सुख पाउने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो । युवाहरु तयार भएपछि आफू अलि भिन्न भूमिकामा जाने तयारीमा रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो।
माधवले र मैले लड्डु खान नपाई ड्याम्म टाउकोमा घन हानियो: प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले केपी प्रवृत्तिसँग लडेर हाललाई विजय हासिल गरेको भए पनि रिल्याक्स मुडमा भने हुन नहुने बताएका छन् । वाईसीएल नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘अहिले हामी विजयी मुडमा छौं, तर कहिलेकाहिँ के हुन्छ भने विजयी भयो भनेर रिल्याक्स गर्न थाल्दा रहेछौंँ, कुनबेला घन हान्छन् पत्तो हुन्न।’
पहिलोपटक ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि माधव नेपालसँग मिलेर लड्डु खाएको प्रसंग स्मरण गर्दै प्रचण्डले भने, ‘पहिलोचोटि संसद पुनर्स्थापना भएपछि माधवले र मैले लड्डु खाइयो । त्यो लड्डुको स्वाद जान पाएको थिएन, दुईटा पार्टी भए । ड्याम्म फेरि टाउकोमा धन हानेजस्तो आइहाल्यो । बल्ल बल्ल त्यसलाई सम्याइया छ, अब के आउने हो भन्नेमा पनि सर्तक हुनुपर्छ ।’
समाजवादी विचारमा स्पष्ट भएमा तथा प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नेतर्फ इमान्दार भएमा जित निश्चित भएको प्रचण्डले बताए ।
प्रचण्डले आफूले छिट्टै राजनीतिबाट बिदा हुन चाहेको बताए । युवालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर आफू राजनीतिबाट बिदा हुन चाहेको र फूसर्दमा संस्मरण लेख्न चाहेको उनको भनाई छ । ‘समाजवादी क्रान्तिको नेता हुने अवसर युवामा छ । अब मलाई छिटोभन्दा छिटो बिदा लिएर संस्मरण लेख्न मन छ’ प्रचण्डले भने, ‘तर तपाईहरु तयार नभएसम्म मलाई सुख छैन ।’ सो क्रममा प्रचण्डले ३८ सालमा आफू युवा संघको अध्यक्ष भएको र विभिन्न परिवर्तनको आन्दोलन देख्दै, भोग्दै यहाँसम्म आइपुगेको पनि सप्रसँग ब्याख्या गरे ।
‘…त्यो त केपीको ठगी धन्दा रहेछ’
अध्यक्ष प्रचण्डले ओली एउटा भन्ने र अर्कै गर्ने नेता भएको बताए । ओलीले ठीक विपरीत कार्य गरेको आरोपसमेत प्रचण्डले लगाए । ‘केपी ओलीमा भन्ने एउटा गर्ने अर्कै प्रवृत्ति छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ रे ! भ्रष्टाचार गर्ने मान्छेलाई देख्न पनि चाहन्नँ भन्ने भाषामात्रै रहेछ’ प्रचण्डले भने, ‘रक्सी अर्कै छ, लेबल त्यो राख्ने भन्ने रहेछ उहाँको बानी त ।’
पार्टी एकता ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ठगी धन्दामात्रै चलाएको पुष्टि भएको प्रचण्डले आरोप लगाए । ‘कतिपय साथीले एकता गर्नु नै बेकार रहेछ पनि भन्नुहुन्छ, तर एकता गर्नैपथ्र्याे’ प्रचण्डले भने, ‘विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनमा अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमा माओवादी आन्दोलनलाई निर्णायक भूमिका खेल्यो भन्नेमा केपीले सही गरेका छन् । अध्यक्ष र प्रम पालो पालो बन्ने भन्नेमा सही गरेको छ । तर, प्रम प्राप्त गर्नका लागि केपीको सबै ठगी धन्दा रहेछ ।’
‘प्रतिगमनका नाइकेका कारण पार्टी एकता टिकेन’
‘प्रचण्ड’ले ओली प्रतिगमनको नाइके भएको टिप्पणी गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमनलाई निमन्त्रण दिएको तर सबै दलहरु एकढिक्का भएर प्रतिरोध गर्दा प्रतिगमन परास्त भएको उनको भनाइ छ ।
उनले समाजवादी यात्राको तयारीका लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा एकता गरिएपनि प्रतिगमनको नाइकेहरूका एकता नटिकेको उल्लेख गरे । उनले पहिलोपटक भएको संसद विघटनलाई आफूले जनयुद्धकै एउटा रुपका रुपमा लिएको स्मरण गर्दै त्यसलाई प्रतिगमन भनेर युवाहरुले साथ दिएको भन्दै प्रशंशा गरे ।
‘संसद विघटन विरुद्ध उभिँदा सबैले जीवन मरणकै संघर्षका रुपमा लियौं । पटक पटक लाखौँ जनता सडकमा उतारियो । अरु दल पनि संविधान र लोकतन्त्रका विरुद्ध घात हो भनेर एकजुट हुनुभयो’, उनले भने । समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउने कार्यमा युवाहरु जुट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले वातावरण पनि रहेको बताए । ‘समाजवादी आन्दोलनलाई अघि बढाउन अहिले वातावरण छ’ उनले नेता कार्यकर्तालाई भने, ‘हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ ।’
पछिल्लो समय बनेको राजनीतिक गठबन्धनको रक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँदै उनले यो गठबन्धन धेरै दुःखले बनाएको बताए । उनले भने, ‘यस अर्थमा पनि धन्यवाद भन्छु कि निरंकुश र प्रतिगमनकारीलाई परास्त गर्दै अहिलेको ठाउँमा आइपुगियो । हाम्रो आशा तपाईँहरूमाथि छ । हामी जीवनको उत्तरार्द्धमा छौं ।’ विचार र प्रवृत्ति बुढो नहुने बताउँदै उनले यसका लागि युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘प्रतिक्रान्तिलाई रोक्नका लागि समाजको लक्षित समूदायलाई अघि बढाउनुपर्छ ।’
२०३८ सालको स्मरण
वामपन्थी र काँग्रेस मिलेर पञ्चायतलाई परास्त गरे पनि परिवर्तन अपुरो रहेको भन्दै जनयुद्धमा गएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘खासगरी गणेशमान सिंहलाई कमाण्डर मानेर गरिएको आन्दोलनबाट पञ्चायत ढल्यो । पार्टीमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो । मार्क्सवादी र माले बनेर एमाले बन्यो, काँग्रेसले चुनाव जित्यो । काँग्रेसभित्रकै अन्तरविरोधका कारण मध्यावधि बन्यो । परिवर्तन अधुरो र अपुरो छ भन्ने निष्कर्ष निकालेँ र तात्कालीन पार्टीभित्र पारित पनि भयो–मध्यावधि निर्वाचनलाई बहिस्कार गरेर जनयुद्धको सुरुवात भयो ।’
जनयुद्ध र जनआन्दोलनकै जगबाट परिर्वतन भएको स्मरण गर्दै त्याग र बलिदानको ठूलो कीर्तिमान निर्माण भएको बताए । प्रचण्डले भने, ‘पृथ्वीनारायण शाहपछि धेरै ठूलो आन्दोलन थियो त्यो ।’
पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र काँग्रेस युवा नेता महरबीच धनगढीमा भेटवार्ता, के–के भयो कुराकानी ?
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा नेता बाबुराम भट्टराई र काँग्रेस युवा नेता नैनसिँह महरबीच भेटवार्ता भएको छ । जसपा पार्टी विस्तारका क्रममा धनगढी आएका भट्टराई र काँग्रेसको जिल्ला अधिवेशन अघि गृह जिल्ला पुगेका महरबीच शुक्रवार धनगढीमा भेट भएको हो ।
भेटमा समसामयीक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको महरले जनाएका छन् । भट्टराईले उठाएका मुद्दा जनताको पक्षमा साँच्चिकै अब्बल भएको बताउँदै महरले त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यानकेन्द्रीत हुन नसकेको बताएका थिए ।
भट्टराईले उक्त विषयमा थप छलफल गरेर निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउँदै भट्टराईले गम्भीर विस्तृत विमर्श आवश्यक रहेको बताएको भट्टराईलाई उद्धृत गर्दै महरले जानकारी दिएका छन् ।